Karim Benzema oo si xun ula dhaqmay Barcelona oo Gurigiisa ku soo booqatay…..!!!! – Gool FM
(Spain) 19 Feb 2019. Sheeko dhawaan daaha laga rogay ayaa lagu sheegay in dhaliyaha Real Madrid ee Karim Benzema uu si xun ula dhaqmay Maamulka Barcelona mar ay mininkiisa ku soo booqdeen.
Barcelona ayaa dooneysay weeraryahan Cusub markii uu xilka u qabtay Pep Guardiola 2008-dii maadaama aysan dooneyn inay xisaabsadaan Samuel Eto’o oo markaas u joogay.
Karim Benzema ayaa ahaa bartilmaameedkoodii ugu waynaa waqtigaa iyadoo dhaliyaha reer France uu wacdaro aan innaba caadi ahayn ka dhigayay naadiga Olympique Lyonnais.
Txiki Begisristain xoghayaha Farsamada Barcelona ayaa waday howl-galka lagu soo xero galinayo Benzema wuxuuna booqday gurigiisa ku yiilay Lyon si uu ugu qanciyo inuu ku soo biiro kooxdiisa, Maamulkii joogay Camp Nou waxayba u qaateen in weeraryahanka uu ku soo biiri doono.
Yeelkeede, Begisristain kuma farxin wax kasta uu ku soo arkay guriga Benzema wuxuuna sheegay inuusan ka helin asxaabta dhaliyaha reer France, sida uu ula hadlayay wuxuu xitaa carabka ku dhuftay inuusan kor u soo eegin Benzema intii ay wada hadlayeen.
Sidii uu Benzema ula dhaqmay kaddib, Barca ayaa go’aansatay inaysan la soo saxiixan maadaama ay jirtay khatar ah inuu dhibaato ku noqdo isla markaana la qabsigiisa kooxda aysan noqoneyn mid sahlan.
Zlatan Ibrahimovic ayaa Barca u yimid 2009 iyadoo lagu soo badeshay Samuel Eto’o, David Villa ayaa isna sanad kaddib soo cago dhigtay Camp Nou si uu u dhaxlo booska joog dheeraha reer Sweden.
Intaa kaddib Real Madrid ayaa ku qamaartay oo soo qaadatay laacibka reer France ee Benzema , si joogta ah ayaana loogu soo bilaabayay safka kooxda tan iyo markaa.
"Sarri si ku tala gal ah ayuu u Bur-Burinayaa Chelsea.".-
Xiddigaha Man United oo isku wada taagay Ookiyaal/Indho-gashi kaddib markii ay.....